PageRank: न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त लागू गरियो Martech Zone
PageRank: न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त लागू गरियो
शनिबार, डिसेम्बर 29, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 20, 2015 Douglas Karr
न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तमा भनिएको छ कि आम मानिसहरु बीचको शक्ति दुई सामूहिकको उत्पादनको समानुपातिक र ती जनसंख्या बीचको दूरी वर्गको विपरित समानुपातिक छ:
गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त वर्णन गरिएको:
F दुई पोइन्ट जनता बीचको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको परिमाण हो।
G गुरुत्वाकर्षण स्थिर छ।
m1 पहिलो पोइन्टको द्रव्यमान हो।
m2 दोस्रो पोइन्टको द्रव्यमान हो।
r दुई पोइन्ट जनता बीचको दूरी हो।
सिद्धान्त वेबमा लागू गरियो:
F तपाईको खोज इञ्जिनको स्तर बढाउनको लागि चाहिएको बलको परिमाण हो।
G (गुगल?) स्थिर छ।
m1 तपाइँको वेबसाइट को लोकप्रियता हो।
m2 वेबसाइटको लोकप्रियता हो जुन तपाईंसँग लिंक गर्न चाहनुहुन्छ।
r दुई वेबसाइटको स्तर निर्धारण बीचको दूरी हो।
खोजी ईन्जिनहरूले स्थिरहरूलाई आपूर्ति गर्दछ जुन दुई वेबसाइटहरू बीचको शक्तिको परिमाण निर्धारित गर्दछ। को एक जटिल एल्गोरिथ्मको विकास गरेर PageRank यसले पछाडि लिंकहरू, अधिकार, लोकप्रियता र रिसीन्सी समावेश गर्दछ, खोज इञ्जिनहरूले स्थिरलाई नियन्त्रण गर्दछ।
कल्पना गर्नुहोस् गूगल टेलिस्कोप भएको कारण सब भन्दा ठूला ग्रहहरू र ब्लगोस्फीयर ब्रह्माण्ड हो।
मलाई थाहा छैन यदि ल्यारी पेज (पेजरन्कमा 'पेज') र सर्जे ब्रिनले वास्तवमा न्यूटनको सिद्धान्तको बीचमा समानन्तर बनायो जब उनीहरूले कोर एल्गोरिथ्म (हरू) लाई विकास गरे। गुगल स्टारडम गर्न। यो सिद्धान्तलाई बुझ्ने र यसलाई वेबमा लागू गर्ने खोज ईन्जिन मार्केटिंगमा हेर्ने एक तरीका हो, यद्यपि। साथै, मलाई लाग्छ कि यो केवल सादा गीकी ठण्डा हो कि समानान्तर कोर्न सकिन्छ।
त्यसोभए - यदि तपाइँ खोजी ईन्जिनमा अझ राम्रो रँकिंग प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँको उत्तम शर्त अन्य साइटहरू फेला पार्नु हो जुन किवर्डहरूमा राम्रो क्रममा मिल्दछ र यदि तपाइँ तिनीहरूको ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्। यदि तिनीहरूले तपाईंलाई केहि ध्यान प्रदान गर्छन्, लागू बलले तपाईंलाई उनीहरूको नजीक लैजान्छ। ठूला जनमानस (एर ... पेजरेन्क्स) को साथ ब्लगहरू अन्य साना साइटहरूलाई नजिक तान्न सक्षम छन्।
खोज इञ्जिन मार्केटरहरूले थियरीलाई चिन्थे
सशुल्क लिंकहरू दुबै धेरै लोकप्रिय र हुन् गुगलले आक्रमणमा। गुगलले भुक्तान लिंकलाई कृत्रिम रूपमा कार्बनिक खोज परिणामहरू ड्राइभि as र साइटहरू तान्न को रूपमा सम्मान गर्दछ जुन सायद यो योग्य छैन। धेरै ब्लगरहरू (मलाई सहित) हेर्नुहोस् जुन उनीहरूको मेहनत गरेको अधिकारलाई क्यापिटल गर्दै।
लगभग दैनिक म वैध व्यवसायहरूबाट प्रस्तावहरू प्राप्त गर्दछु जसले मेरो साइटलाई छेउमा लिनको लागि लाभ लिन चाहन्छ। म असाधारण फिनीकी हुँ, यद्यपि। मितिमा मैले $ १२,००० भन्दा बढी पाएको छु। त्यो फर्काउनको लागि धेरै पैसा जस्तो लाग्न सक्छ, तर जोखिम यो हो कि मैले मेरो ब्लगलाई वेश्यावृति गरेको हुँ र गुगलले मलाई जेलमा हालिन्छ पूरक अनुक्रमणिका).
ठुलो तस्विरमा, म पक्का छैन गुगल भुक्तान लिंक फिएस्को पार गर्न सक्नुहुन्छ। केही व्यक्तिहरू केवल गुरुत्वाकर्षणको कानूनहरू लागू गर्दैछन् जस्तो देखिन्छ र Google प्रकृतिको कानूनहरू विरुद्ध लड्न कोशिस गर्दैछ।
ती माइक्रोसफ्ट मान्छे राम्रो हो!
यसले यस पोष्टलाई प्रेरित गरेन, तर मैले यस पोष्टको अनुसन्धान गर्दा मैले त्यो फेला पारे माइक्रोसफ्ट जारी जानकारी पुन: प्राप्तिको लागि गुरुत्वाकर्षण-आधारित मोडेल अगस्त २०० 2005 मा कागज। चाखलाग्दो।
टैग: bingगुरुत्वाकर्षणMicrosoftpagerankपृष्ठरk्क एल्गोरिथ्मर्याङ्किङ्गएसईओ
२००:: माइक्रोको वर्ष
गुगलले तपाईंसँग $ 1B राजस्व सेयर प्रोग्राम घोषणा गर्‍यो!